I-china isikulufa sepulasitiki esandisiwe esenziwe ngokwezifiso - Abenzi - I-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd
Ikhaya >Imikhiqizo >Izingxenye zefenisha yePlastiki>Ipulasitiki Isikulufa Inwebisa Ipulaki
7 * 35mm PE ukunwetshwa plug
Amaphiko we-blade kushubhu lokunweba angavimbela ishubhu lokunweba ekujikelezeni futhi lenyuse ukungqubuzana ngesikhathi sokufakwa. Ngomklamo omuhle wokunweba wejika, ithuthukisa kakhulu amandla okubamba futhi ivimbela ngempumelelo isikulufa ekuweni.
8 * 40mm PE ukunwetshwa plug
7.5 * 38mm PE ukunwebeka plug
9 * 40mm PE ukunwetshwa plug
Imibuzo evame ukubuzwa: 1. Ingabe unayo imboni yakho? Yebo, singabakhiqizi eChina iminyaka engaphezu kwengu-10. Kwemboni yethu itholakala esifundazweni Guangdong. 2. Ngingavakashela kanjani imboni yakho? Ama-Pls ngomusa asazise kusenesikhathi uma uhlela ukuvakasha. Singakukhombisa indlela noma sikulande esiteshini noma esikhumulweni sezindiza.